Purna Shova Chitrakar (@purna) - Naya
@purna is onlineoffline
Hi there, I'm Purna Shova Chitrakar and I joined Naya 2014-01-29T06:01:12Z.
0 total uploads by @purna
@purna has not uploaded any attachments yet!
Collections created by @purna
@purna has not created any collections yet!
चीनको सांघार्इमा बनेको डिज्नी वल्र्डमा घुम्दा रमार्इलो लाग्यो ।
भूजा बनाउने परंपरागत व्यवसायीहरु धरापमा
छेडी कँहार उनको नाम हो । उनको परंपरागत तथा पारीवारिक व्यवसाय भुजा बनाउने थियो । कँहार भूजा बनाउनेहरुको थर हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि भुजा बनाउनेहरुको लागि विशेष थर हुन्थ्यो । काठमाडौंमा भुजा (गोःफुकी र स्याबजि ) दुर्इ प्रकारको भुजा पार्इन्छ । स्याबजि खास गरी समेबजिको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । उपत्यकाका नेवार समुदायमा प्रत्येक चाडवाड, पुजामा समेबजि खाने चलन छ । समेबजिमा स्याबजि, चिउरा, छ्वयला, अचार, सुकेको बोडी र हरियो मास उसिनेर साँदेको, हरियो सागको तरकारी, हरियो केराउ भिजाएको, मूला वा काँक्रो, वारा आदि राखेर खाने चलनछ । तरार्इमा वा उपत्यकाका परंपरागत र पारीवारिक धरोहरको रुपमा थामिंदै आएको भुजा र स्याबजि बनाउने पेशा हिजो आज ठूला व्यापारीहरुको कारणले धरापमा पर्दै गएकोछ । ल्पास्टीकको पोको बनाएर घर घर, पसल पसलमा पुर्याउने चलन आउँदा पुराना ती व्यापारीहरु अहिले बेरोजगार बनेकाछन् ।
परालको थुप्राहरु भित्र पुग्दा त्यहाँको रंगले मरुभूमीको रंगको झझल्को पनि दिने रहेछ । कपिलबस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेमा पर्ती जग्गामा धान काट्को लागि सामूहिक थलो बनाएको रहेछ । स्थानिय बोलीमा त्यसतो स्थानलाई खलान भनिंदो रहेछ । पराललाई चाँग लगाएर मन्दिर जस्तो बनाएकोलार्इ तराईमा माच र पहाडमा कुन्यू भनिंदो रहेछ । रमार्इलो लाग्ने त्यस खलानले बालककालमा सुलाकासा खेलेको सम्झना गरायो । शायद सवै ठाउँका बालबालिकाहरुको मनोभावनाहरु उस्तै उस्तै हुने रहेछ । एक हुल केटाकेटीहरु त्यो क्षण पनि खेलीरहेका थिए सुलाकासा।
कपिलबस्तु जिल्लाको तिरौलाकोटलार्इ बुद्ध जन्मेको दरबार मानिन्छ । त्यसलार्इ उत्खनन् गरेर सर्वसाधारणहरुको ज्ञानको गन्तव्यको लागि खुला गरिएकोछ । हेर्दा लाग्छ, यो शुरुआती दिनको प्रयास हो । अझै धैरै गर्न बाँकीछ । छिट्टै यसको बिकशित स्वरुप देख्न पाउँ र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बौद्ध धर्मालम्बीहरुको लागि धर्मदेशना, र्इतिहासकार, अन्वेषक, समाजशास्त्रीहरुको लागि ज्ञानको भण्डारको रुपमा स्थापित हुन सकियोस । शुभेच्छा ।
यी भाँडाहरुका नाम डेरी हुन् । तराईमा बिशेष गरी चौधरी परिवारका घरहरुमा यी भाँडाहरुको खुब प्रचलन छ । स्थानीय शिपबाट भूस, माटो, पराल मुछेर यी भाँडाहरु बनार्इन्छ । यसले धान, गहुँ, मकै आदि अन्नलाई गर्मी र जाडोबाट बचाउँछ । किसानहरुलाई चाहिएको बेलामा चाहिने जति निकालेर काम चलाउन सक्छन्। यी फोटोहरु गोरुसिंगे कपिलबस्तुका हुन् ।
@purna : Page 1 ---------- @purna : Page 3